Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.4.3 Non-puru omume samples: sample kenha
Ọ bụghị ihe niile na-abụghị nke puru omume samples bụ otu. Anyị nwere ike tinye ihe akara na n'ihu ọgwụgwụ.
The obibia Wang na ndị ọrụ ibe ji na-eme atụmatụ pụta nke 2012 US president ntuli aka dabeere kpam na oganihu data analysis. Ya bụ, ha anakọtara ọtụtụ Ibọrọ dị ka ha nwere ike mgbe ahụ nwara re-arọ ha. A arụkọ atụmatụ maka-arụ ọrụ na-abụghị nke puru omume ụfọdụ bụ ka ndị ọzọ achịkwa ahụ data collection usoro.
Mfe atụ nke a ikpe na-achịkwa abụghị ihe gbasara nke puru ụfọdụ usoro bụ oke ụfọdụ, a na Usoro nke na-aga azụ ka mmalite ụbọchị nke nnyocha e mere nnyocha. Na oke ụfọdụ, na-eme nnyocha kee ndị bi n'ime dị iche iche iche iche (eg, okorọbia, ụmụ agbọghọ, wdg) mgbe ahụ set quotas ka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ ga-ahọrọ ọ bụla otu. Zaghachirinụ na-ahọrọ na a haphazard n'ụzọ ruo mgbe na-eme nchọpụta ka zutere ha oke nke ọ bụla otu. N'ihi na nke quotas, na n'ihi sample ese ihe dị ka lekwasịrị bi karịa u ga-eme ma ọ bụghị na, ma n'ihi na probabilities nke Nsonye na-amaghị ọtụtụ nnyocha ndị obi abụọ nke oke nlele. N'ezie, oke nlele bụ a kpatara nke "Dewey merie Truman" njehie na 1948 US Presidential ntuli aka. N'ihi na ọ na-enye ụfọdụ achịkwa ahụ na nlele usoro, Otú ọ dị, otu onye nwere ike ịhụ otú oke ụfọdụ nwere ike ụfọdụ uru n'elu a kpam kpam na-achịkwaghị data collection.
Akpụ akpụ n'ofè oke ụfọdụ, ihe n'oge a na-eru nso ka ịchịkwa ndị na-abụghị nke puru omume ụfọdụ usoro nwere omume ugbu a. One dị otú ahụ obibia a na-akpọ sample kenha, na ọ na-eji ụfọdụ azụmahịa online panel na enye. Na ya mfe ụdị, sample kenha chọrọ abụọ data isi mmalite: 1) a zuru ezu aha nke ndị bi na 2) a nnukwu panel ndị ọrụ afọ ofufo. Ọ dị mkpa ka ndị ọrụ afọ ofufo na-adịghị mkpa na-a ihe gbasara nke puru sample ọ bụla bi; mesie ya ike na e nweghị ndị a chọrọ maka nhọrọ n'ime panel, na m ga na-akpọ ya a ruru unyi panel. Ọzọkwa, ma ndị bi aha na unyi panel ga-agụnye ụfọdụ inyeaka ọmụma banyere onye ọ bụla, a ka ihe atụ, Aga m ewere na afọ na nwoke, ma ezi uche ọnọdụ a inyeaka ọmụma pụrụ ịka nnọọ zuru ezu. Nke atọ nke sample kenha bụ họrọ n'omume si a ruru unyi panel n'ụzọ na-arụpụta samples na anya dị ka ihe gbasara nke puru samples.
Sample kenha amalite mgbe a simulated gbasara nke puru omume sample na-e si bi aha; a chepụtara echepụta sample na-aghọ a lekwasịrị sample. Mgbe ahụ, nke dabeere na inyeaka ọmụma, ikpe na lekwasịrị sample na-adịkwa ka ndị mmadụ na unyi panel na-etolite a ekwekọghị sample. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na e nwere 25 afọ nwaanyị na lekwasịrị sample, mgbe ahụ na-eme nchọpụta okụtde 25 afọ nwaanyị si unyi panel na-ke ekwekọghị sample. N'ikpeazụ, ndị na-ekwekọghị sample na-gbara ajụjụ ọnụ na-emepụta ikpeazụ set nke ndị zaghachirinụ.
N'agbanyeghị na ndị ekwekọghị sample anya dị ka lekwasịrị sample, ọ dị mkpa ka anyị cheta na ekwekọghị sample abụghị a ihe gbasara nke puru sample. Ekwekọghị n'omume nwere ike na-dakọtara na lekwasịrị sample na mara inyeaka ọmụma (eg, afọ na mmekọahụ), ma ọ bụghị na unmeasured e ji mara. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ndị mmadụ na unyi panel agbasaghị inwe daa ogbenye na-mgbe niile, otu ihe isonyere a nnyocha e mere panel bụ iji kpata ego-ahụ ọbụna ma ọ bụrụ na ekwekọghị sample anya dị ka lekwasịrị sample na okwu nke afọ na mmekọahụ na ọ ga-ka nwere a echiche ọjọọ n'ebe ndị ogbenye. The anwansi nke ezi gbasara nke puru omume ụfọdụ bụ na-achị si nsogbu na ma tụrụ na unmeasured e ji mara (a mgbe nke kwekọkwara nkwurịta okwu anyị nke kenha maka causal inference si observational ọmụmụ ke Ibuot 2).
Na omume, sample kenha-adabere n'inwe a buru ibu ma na iche iche panel ọkụ n'obi mezue nnyocha ndị e mere, ma si otú ọ na-tumadi na-eme site na ụlọ ọrụ ndị na ike imeli ịzụlite na ịnọgide na-enwe dị otú ahụ a panel. Ọzọkwa, na omume, e nwere ike nsogbu na kenha (mgbe ụfọdụ a mma egwuregwu n'ihi na onye nọ lekwasịrị sample-adịghị adị na ihe panel) na na-abụghị omume (mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na ekwekọghị sample ajụ ịga na nnyocha e mere). Ya mere, na omume, na-eme nnyocha na-eme sample kenha nwekwara ịrụ ụdị ụfọdụ nke post-stratification ukpụhọde ime ka atụmatụ ndị e mere.
Ọ bụ ike iji nye bara uru na usoro iwu di banyere sample kenha, ma na omume ya nwere ike ịrụ ọma. Dị ka ihe atụ, Stephen Ansolabehere na Brian Schaffner (2014) tụnyere atọ yiri nnyocha ndị e mere nke ihe dị ka 1,000 mmadụ na ekenịmde ke 2010 site na iji atọ dị iche iche nlele na ajụjụ ọnụ ụzọ: mail, ekwentị, na udi Naneti panel iji sample kenha na post-stratification ukpụhọde. The atụmatụ e mere si atọ na-eru nso bụ nnọọ yiri ka atụmatụ e mere si elu-edu benchmarks dị ka Ugbu A Population Survey (CPS) na National Health Interview Survey (NHIS). More kpọmkwem, ma ndị Internet na mail nnyocha ndị e mere na-anya site nkezi nke 3 pasent ihe na ekwentị nnyocha e mere bụ oyi site na 4 pasent ihe. Njehie a nnukwu ihe dị ihe mmadụ pụrụ ịtụ anya site n'omume nke dị ka 1,000 mmadụ. Ọ bụ ezie na ọ dịghị onye n'ime ndị a ụdịdị emepụta n'ụzọ ka mma data, ma ndị Internet na ekwentị nnyocha e mere (nke were ụbọchị ma ọ bụ izu) bụ n'ụzọ ngwa ngwa ka ubi karịa mail nnyocha e mere (nke were ọnwa asatọ), na Internet nnyocha e mere, nke eji sample kenha, bụ ọnụ ala karịa ndị ọzọ na abụọ ụdịdị.
Ná mmechi, na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na statisticians bụ incredibly obi abụọ nke inferences ndị a na-abụghị ndị ihe gbasara nke puru samples, na akụkụ n'ihi na ha na-metụtara ụfọdụ ihere ọdịda nke nnyocha e mere nnyocha dị otú ahụ dị ka akwụkwọ ọgụgụ Digest nghoputa. Na akụkụ, m na-ekweta na a skepticism: unadjusted na-abụghị nke puru omume samples ndị yiri ka na-emepụta ihe ọjọọ atụmatụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na-eme nnyocha nwere ike ịgbanwe maka biases na nlele usoro (eg, post-stratification) ma ọ bụ ịchịkwa ụfọdụ usoro dịtụ (eg, sample kenha), ha nwere ike na-emepụta mma atụmatụ e mere, na ọbụna kwuru nke zuru ezu àgwà n'ihi na ọtụtụ nzube. N'ezie, ọ ga-aka mma ime ihe n'ụzọ zuru okè gburu gbasara nke puru omume ụfọdụ, ma na-aba yiri ka a ezi uche nhọrọ.
Ma ndị na-abụghị nke puru omume samples na ihe gbasara nke puru samples ịdị iche na ha àgwà, na ugbu a na ọ bụ eleghị ikpe na ọtụtụ atụmatụ e mere si puru omume samples bụ ịtụkwasị obi karịa atụmatụ ndị e mere si na-abụghị nke puru omume samples. Ma, ọbụna ugbu a, atụmatụ e mere si mma-ekenịmde na-abụghị nke puru omume samples na-eleghị anya ka mma karịa atụmatụ ndị e mere site na-agụghị oké-ekenịmde gbasara nke puru omume samples. Ọzọkwa, ndị na-abụghị nke puru omume samples bụ n'ụzọ dị ọnụ ala karịa. N'ihi ya, ọ na-egosi na ihe gbasara nke puru vs na-abụghị nke puru omume ụfọdụ awade a na-eri-edu ahia-anya (ọgụgụ 3.6). Na-atụ, m na-atụ anya na atụmatụ e mere si ọma mere na-abụghị nke puru omume samples ga-aghọ dị ọnụ ala karịa na mma. Ọzọkwa, n'ihi ndakpọ nke Landline ekwentị nnyocha ndị e mere na-amụba udu nke na-abụghị omume, m na-atụ anya na ihe gbasara nke puru samples ga-aghọ ihe dị oké ọnụ ma nke ala àgwà. N'ihi ihe ndị a ogologo oge na ọnọdụ, m na-eche na-abụghị nke puru omume ụfọdụ ga-aghọwanye mkpa na nke atọ oge nke nnyocha e mere nnyocha.
Ọgụgụ 3.6: gbasara nke puru omume ụfọdụ na omume na-abụghị nke puru omume ụfọdụ ndị ma nnukwu, heterogeneous ige. Ke ofụri ofụri, e nwere a na-eri-njehie ahia-apụ na-abụghị nke puru omume ụfọdụ ịbụ ala na-eri ma elu njehie. Otú ọ dị, nke ọma mere na-abụghị nke puru omume ụfọdụ nwere ike mma atụmatụ e mere karịa agụghị oké-eme ihe gbasara nke puru nlele. N'ọdịnihu, m na-atụ anya na ndị na-abụghị nke puru omume ụfọdụ ga-esi ka mma ma dị ọnụ ala mgbe ihe gbasara nke puru ụfọdụ ga-aka njọ na ndị ọzọ dị oké ọnụ.